Tranofiara tsara indrindra mpamokatra thermoplastic sy orinasa | Wanhoo
Ny zipo tranofiara na zipo amin'ny sisiny dia fitaovana apetaka eo ambanin'ny semi-trailer, mba hampihenana ny fitarihana aerodynamika ateraky ny fikorontanan'ny rivotra.
Ny sisin-tsarimihetsika dia misy takelaka roa mifatotra amin'ny sisiny ambany amin'ny tranofiara, mihazakazaka ny ankamaroan'ny halavan'ny tranofiara ary mameno ny banga eo anelanelan'ny axles mandroso sy aoriana. Ny zipo amin'ny tranofiara dia mazàna vita amin'ny alimo, plastika, na fiberglass, miaraka amin'ny plastika izay mahatohitra indrindra ny fahasimbana avy amin'ny fiantraikany amin'ny lafiny na amin'ny farany ambany.
Ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2012 nataon'ny SAE International momba ny endrika zipo tranofiara sivy dia nahatsikaritra fa ny telo nanome tahiry solika mihoatra ny 5%, ary ny efatra nanome tahiry teo anelanelan'ny 4% sy 5%, raha oharina amin'ny tranofiara tsy novaina. Ny zipo miaraka amin'ny fahazoana madiodio amin'ny tany dia manome tahiry lehibe kokoa; ohatra, ny fampihenana ny fahazoan-dàlana avy amin'ny 16 in (41 cm) ka hatramin'ny 8 in (20 cm) dia nihatsara ny tahiry solika avy amin'ny 4% ka hatramin'ny 7%. ho an'ny endrika manokana nianarana. Sean Graham, filohan'ny mpamatsy sisin-tsarimihetsika lehibe, dia nanombana fa amin'ny fampiasana mahazatra, ny mpamily dia mahita tahiry 5% ka hatramin'ny 6%.
Azontsika atao ny manampy ny mpanjifanay hanao ny endrika. Tehirizo ny fotoananao sy ny vidinao hanangonana azy. Ny accessories dia azo namboarina. Miaraka amin'ny traikefa manan-karena amin'ny famolavolana firafitra, afaka mifanaraka amin'ny takian'ny ankamaroan'ny mpanjifa izahay.
Noho ny firafitry tantely manokana, ny haben'ny tantely dia manana hakitroka kely dia kely.
Raiso takelaka tantely 12mm ohatra, ny lanjany dia azo foronina ho 4kg / m2.
Ny hoditra ivelany dia manana tanjaka tsara, ny akora fototra dia misy fanoherana mahery vaika ary henjana amin'ny ankapobeny, ary afaka manohitra ny fiatraikany sy ny fahasimban'ny fihenjanana ara-batana lehibe
Fanoherana rano sy fanoherana ny hamandoana
Manana fahombiazana famehezana tsara izy io ary tsy mampiasa lakaoly mandritra ny fizotry ny famokarana
Tsy ilaina ny manahy momba ny fiantraikan'ny fampiasana maharitra ny orana sy ny hamandoana, izay fahasamihafana tsy manam-paharoa eo amin'ny takelaka hazo sy hazo.
Ny haben'ny mari-pana dia lehibe, ary azo ampiasaina amin'ny toetry ny toetr'andro indrindra eo anelanelan'ny - 40 ℃ sy + 80 ℃
Ny akora rehetra dia azo averina averina 100% ary tsy misy akony amin'ny tontolo iainana
Sakany: azo namboarina tao anatin'ny 2700mm izy io
Halavany: azo namboarina
Hateviny: eo anelanelan'ny 8mm ~ 50mm
Loko: fotsy na mainty
Mainty ny takelaka tongotra. Ny faritra dia manana tsipika pitting mba hahatratrarana ny vokatry ny anti slip
Teo aloha: Tontonana maina karatra boaty-Thermoplastic
Manaraka: Fanamafisana plastika fibre karbaona voatetika
Pipe Thermoplastic nohamafisina
Carbon fibre UAV Rack-Hydrogen Energy
Bisikileta hidrogen (bisikileta sela misy solika)